बिरामी व्यक्तिलाई मदत गर्नुहोस्
आवरण लेख पारिवारिक कलह कसरी हुन्छ?
आवरण लेख पारिवारिक कलह कसरी रोक्न सकिन्छ?
आवरण लेख परिवारमा कसरी शान्ति कायम गर्न सकिन्छ?
परिवारको लागि मदत भिन्नताहरूको सामना गर्नुहोस्
आफूले माया गरेको व्यक्ति बिरामी हुँदा
परिवारको लागि मदत छोराछोरीको प्रशंसा गर्नुहोस्
बाइबलको दृष्टिकोण संसारको अन्त
सृष्टि या संयोग? घाउ निको पार्न सक्ने मानव शरीरको क्षमता
मरेपछि हामीलाई के हुन्छ?
ब्यूँझनुहोस्! | सङ्ख्या १ २०१६
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“बुबा अस्पतालबाट घर फर्कने दिन हामीले डाक्टरलाई बुबाको रगत परीक्षणको रिपोर्ट एकचोटि फेरि हेरिदिन अनुरोध गऱ्यौं। डाक्टरले सबै रिपोर्ट राम्रो छ, तैपनि हेरिदिन्छु भन्नुभयो। अचम्मको कुरा, दुइटा रिपोर्ट त त्यत्ति राम्रो रहेनछ! उहाँले माफी माग्नुभयो र विशेषज्ञलाई बोलाउनुभयो। बुबालाई अहिले ठीकै छ। तर हामीले डाक्टरलाई त्यसरी सोधेर धेरै राम्रो गऱ्यौं।”—मरीबेल।
डाक्टरकहाँ जानुअघि रोगका लक्षण र आफूले खाइरहेको औषधीबारे सबै कुरा लेख्नुहोस्
डाक्टरलाई भेट्न जानु र अस्पतालमा बस्नु थकाइलाग्दो कुरा हो। मरीबेलको अनुभवले देखाएझैं साथीभाइ वा आफन्तको सहयोग एकदमै मदतकारी हुन्छ। कहिलेकाहीं त त्यसले जीवनसमेत बचाउँछ। आफूले माया गरेको व्यक्तिलाई तपाईं कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ?
डाक्टरकहाँ जानुअघि। बिरामीलाई रोगका लक्षण र आफूले खाइरहेको औषधीबारे सबै कुरा लेख्न मदत गर्नुहोस्। डाक्टरलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू लेख्न पनि मदत गर्नुहोस्। आफ्नो अवस्था कस्तो छ वा परिवारको कुनै सदस्यलाई त्यस्तो रोग लागेको थियो कि भनेर सम्झन पनि मदत गर्नुहोस्। डाक्टरलाई सबै कुरा थाह हुन्छ वा डाक्टरले नै सबै कुरा सोधिहाल्छ नि भनेर नसोच्नुहोस्।
ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आदर देखाउँदै प्रश्न सोध्नुहोस् र नोट लिनुहोस्
डाक्टरलाई भेट्दा। तपाईं र बिरामीले डाक्टरको सबै कुरा बुझ्नुभयो कि भएन, पक्का गर्नुहोस्। प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, आफै अनुमान नलगाउनुहोस्। बिरामीलाई नै प्रश्नहरू सोध्ने मौका दिनुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र नोट लिनुहोस्। के-कस्ता उपचार विधि छन्‌, सोध्नुहोस्। कहिलेकाहीं बिरामीलाई अर्को डाक्टरको सल्लाह लिन सुझाव दिनु पनि राम्रो हुन सक्छ।
डाक्टरले दिएको सुझाव छलफल गर्नुहोस् र सबै औषधी सही छ कि छैन, पक्का गर्नुहोस्
डाक्टरलाई भेटेपछि। डाक्टरलाई भेटेपछि डाक्टरले दिएको सुझावबारे बिरामीसँगै कुरा गर्नुहोस्। तिनले सही औषधी पाए कि पाएनन्‌, पक्का गर्नुहोस्। डाक्टरले दिएको सुझावअनुसारै औषधी खान र औषधी खाएपछि केही समस्या देखिएमा तुरुन्तै डाक्टरलाई भेट्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। बिरामीलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। डाक्टरले अर्को चोटि कहिले बोलाएका छन्‌, के-कस्ता सुझाव दिएका छन्‌, त्यो सम्झन पनि मदत दिनुहोस्। आफ्नो अवस्थाबारे अझ धेरै कुरा थाह पाउन तिनलाई मदत गर्नुहोस्।
सबै फाराम ठीक तरिकामा भरिएको छ कि छैन, पक्का गर्नुहोस्
शान्त र सजग हुनुहोस्। अस्पताल जाँदै गरेको बिरामीलाई चिन्ता लाग्न सक्छ र तिनले निस्सहाय महसुस गर्न सक्छन्‌। तपाईं शान्त र सजग हुनुभयो भने तपाईंले अरूलाई पनि शान्त रहन र हतारमा काम गर्नदेखि जोगिन मदत गर्न सक्नुहुन्छ। सबै फाराम ठीक तरिकामा भरेको छ कि छैन, पक्का गर्नुहोस्। बिरामीले आफ्नो उपचारसम्बन्धी निर्णय आफैले गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुहोस्। गम्भीर बिरामीको कारण तिनी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्‌ भने तिनले पहिल्यै लेखेको इच्छापत्रअनुसार गर्नुहोस्। अनि तिनको नजिकको नातेदार वा स्वास्थ्य प्रतिनिधिलाई दिइएको अधिकारको सम्मान गर्नुहोस्। *
आफूले याद गरेको कुरा डाक्टरलाई बताउनुहोस्
अग्रसर हुनुहोस्। बोल्न नडराउनुहोस्। तपाईंको राम्रो पहिरन र बानीबेहोराले डाक्टर तथा नर्सलाई बिरामीको अझ धेरै ख्याल राख्न र बिरामीको अझ राम्ररी हेरविचार गर्न उत्प्रेरित गर्छ। थुप्रै अस्पतालमा एकै जना बिरामीलाई विभिन्न डाक्टरले हेर्छन्‌। एउटा डाक्टरले भनेको कुरा अर्को डाक्टरलाई बताएर तपाईं तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई बिरामीको अवस्था थाह भएकोले बिरामीको शारीरिक वा भावनात्मक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन देख्नुभएको छ, डाक्टरलाई बताउनुहोस्।
अरूको काममा हात नहाल्नुहोस्
आदर गर्नुहोस् र कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। अस्पतालका कर्मचारीहरू अक्सर तनावमा काम गर्छन्‌। तपाईंलाई जस्तो व्यवहार गरिएको चाहनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। (मत्ती ७:१२) तिनीहरूले हासिल गरेको प्रशिक्षण र अनुभवको लागि तिनीहरूको आदर गर्नुहोस्। तिनीहरूको क्षमतामा भरोसा गर्नुहोस्। तिनीहरूको प्रयासको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। यसो गर्दा तिनीहरूले बिरामीको लागि सक्दो गर्ने प्रोत्साहन पाउनेछन्‌।
बिरामी नहुने त कोही पनि छैन। तर राम्रो योजना बनाउनुभयो र व्यावहारिक मदत गर्नुभयो भने यस्तो गाह्रो अवस्थाको सामना गर्न तपाईंले आफ्नो साथी वा आफन्तलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ।—हितोपदेश १७:१७. (g15-E 10)
^ अनु. 8 बिरामीको अधिकार र कर्तव्यको विषयमा ठाउँअनुसार फरक-फरक नियम हुन्छ। उपचारसम्बन्धी बिरामीको इच्छाबारे बताइएको सबै कागजपत्र ठीक अवस्थामा छ कि छैन, पक्का गर्नुहोस्।
सङ्ख्या १ २०१६ | परिवारमा शान्ति कायम गर्नुहोस्
ब्यूँझनुहोस्! सङ्ख्या १ २०१६ | परिवारमा शान्ति कायम गर्नुहोस्